Halyayga kooxda Liverpool Jamie Carragher oo si xun u wareeray xidigaha PSG – Gool FM
(Champ’ League) 29 Nof 2018. Difaacii hore kooxda Liverpool ee Jamie Carragher ayaan la gambanin in ciyaartoyda Paris St Germain uu ku tilmaamo sida caruurta oo kale.
Halyayga reer England ayaa wuxuu tilmaamay in Ciyaartoyda PSG ay si joogta ah isugu tuurayeen gudaha garoonka inta ay ciyaarta socotay, si ay waqtiga u lumiyaan.
Hadalka Jamie Carragher ayaa wuxuu imaanayaa kadib markii ay kooxda Liverpool kala soo laabatay garoonka Parc des Princes ee kooxda Paris St Germain guuldaro 2-1 ah, kulankooda 5-aad ee heerka group-yada ee tartanka Champions League.
Carragher oo ku gudi jiray gudashada waa jibaadkiisa shaqo ee shabakada “PT Sport” isagoo qeyb ka ahaa falaqeynta kulamadii xalay ee Champions League ayaa wuxuu si gambasho la’aan ah u weeraray ciyaartoyda kooxda PSG.
“Hab dhaqanka ciyaartoyda kooxda PSG, waxay ahaayeen caruur, waa inay naftooda u muujiyaan xishood, ma garanayo sida ay ugu noqon doonaan guryahooda, waa kuwo faraxsan, waxayna la sheekeysan doonaan xaasaskooda”.
“Inaad joogteyso istuur tuurka gudaha garoonka ah (Neymar Jr) meesha keliya ee ficiladan aad ku arki karto waa carwada ama beerta carruurta”.